Qaaciidooyinka Salaada, Iyo Hogaaminta. Qalinkii: Axmed Cali Kaahin Q/1aad.
Thursday July 11, 2019 - 13:55:39 in Articles by Hadhwanaag News
Dhamaan basharka Rabbi (Swt) waxa ku abuuran, buuxin meel madhan, una baahan,
buuxin khushuuceed, raadinta, qalbi daganaantu, waata fadhi iyo joog u diiday, ummado badan. halka ummado, kale risiq ka raadiyaan, u laab qaboojinta bulshadaasi baahan, aduun badan ku bixiya, dunida dacaladeedana, tamashle sanadle ah, oo lagu soo faaruqiyo wixii yaraa ee lagu dhiteeyay, sanadka dhan.
Meelahay ula kacaan, waxa kamida in shaydaanka, qaar caabudaan, qaar kale hawadooda caabudaan, kuwo balwado iyo ciyaaro qaab shushuuceed loo diyaariyay sameeyaan, kuna madadaaliya nafta, hadhsanwayday. Dhamaan dadkaasi waxay ku kulan san yihiin, xataa kuwooda ugu fogi, in awood kale jirto iyo in naftoodu dareemayso baahi, baahidaasi oo ah Salaada. Waxa dhacda in culimada ……. Lasoco qaybta 2aad. haddii Rabbi (Swt). Idmo. Mahadsanid.